I-indiya yokufa kwe-glacier ye-India inyuke yaya kwi-24
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukhuseleko loKhenketho noNgxamiseko » I-indiya yokufa kwe-glacier ye-India inyuke yaya kwi-24
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Safety • Tourism • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ukufikelela okuphezulu e-Uttarakhand kuye kwabethwa ngumkhenkce ngentsasa yangeCawa, kushiye abantu abangama-200 belahlekile
Umsebenzi wokunceda nokuhlangula wawuza kuqhubeka ubusuku bonke
Iqela elidibeneyo loMkhosi weSizwe wokuPhendula kwiNtlekele, uMkhosi wokuPhendula ngeNtlekele kaRhulumente kunye noMkhosi waseIndiya oqhuba umsebenzi wokuhlangula
Kusetyenziswa iqela lezinja ukufumana abasindileyo
Amagosa kwiofisi yolawulo lwentlekele kwingingqi yaseChamoli e Indiya Indawo esezindulini esemantla e-Uttarakhand ithe izidumbu ezingama-24, onke amadoda, afunyenwe kuqhushumbe lomkhenkce ngoMvulo ngokuhlwa.
Ukufikelela okuphezulu kurhulumente kuye kwachaphazeleka ngumkhenkce ngentsasa yangeCawa, kushiya ngaphezulu kwama-200 abantu abalahlekileyo, uninzi lwabasebenzi kwiiprojekthi ezimbini zamandla ombane.
"Izidumbu zifunyenwe phakathi kwendawo apho iqhwa ligqabhuke laza laya ezantsi kwindawo yaseSrinagar kurhulumente," longeze latsho igosa.
Ngokutsho kwakhe, umsebenzi wokunceda kunye nohlangulo wawuza kuqhubeka ubusuku bonke.
Ngokuka-Mphathiswa oyiNtloko welizwe u-Trivendra Singh Rawat, iqela elidibeneyo le-National Disaster Response Force (i-NDRF), i-State Disaster Response Force (SDRF) kunye ne-Indian Army yayiqhuba lo msebenzi wokuhlangula.
Iqela lifikelele kwinqanaba leemitha ezili-130 kwelinye lamatoni aphantse abe li-1,800 leemitha ubude. “Kungathatha iiyure ezimbini ukuya kwezintathu ukufikelela kwinqanaba le-T kwitonela. Iinzame ziyaqhubeka zokuhlangula ngokukhuselekileyo abo babambeke etoneleni, ”wongeze watsho uRawat.
Itonela ekufutshane nendawo ekugqabhuke kuyo umkhenkce kuthiwa izaliswe ziinyawo ezininzi zetyuwa kunye nenkunkuma. Kusetyenziswa oomatshini abanzima ukucoca itonela kunye nokuhlangula abasebenzi ababanjwe ngaphakathi kuyo.
Iqela lezinja liyasetyenziselwa ukufumana amaxhoba, ukuba akhona.
IATA: Imfuno yokuhamba ibonakalise ukuphuculwa komda ngoMeyi